ကျောက်ချဉ် အစွမ်းနဲ့ အမျိုးသမီးများ ကျန်းမာရေး - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ကျောက်ချဉ် အစွမ်းနဲ့ အမျိုးသမီးများ ကျန်းမာရေး
အမျိုးသမီး တွေဟာ အမျိုးသား တွေထက် ကျန်မာရေး ကိစ္စမှာ ၀န်ပိုတွေ ရှိကြပါတယ်။
အခု ကျမ တင်ပြမယ့် အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းမှာ ကျောက်ချဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစွမ်း ထက်မြက်မှု တချို့ပါ။ ကျောက်ချဉ် လို့ ပြောလိုက်ရင် မြန်မာ စာဖတ် ပရိသတ်တိုင်း သိနားလည်ပြီး ဖြစ်နေ ပါလိမ့်မယ်။ လူတိုင်း၊ ပစ္စည်းတိုင်းမှာ သူ့တန်ဘိုး ကိုယ်စီ အသီးသီး ရှိတတ်ကြ စမြဲ ဖြစ်တာမို့ ကျောက်ချဉ် ကလည်း သူ့အစွမ်းက သီးခြား ရှိပါတယ်။
ကျောက်ချဉ်ကို Alumလို့ ခေါ်ပြီး အလူမီနီယမ် ဆာလဖိတ်၊ ပိုတက်ဆီယမ် ဆာလဖိတ်တို့ ပါဝင်တဲ့ ဓာတု တွင်းထွက် တမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်ချဉ်ဟာ အမျိုးသမီးတွေ အတွက် အသုံး အတည့်ဆုံး တခုလို့ ပြောရင် မမှားပါဘူး။ မိန်းမပျိုက အစ၊ ကိုယ်ဝန် မရနိုင်လို့ ကလေး လိုချင်နေတဲ့ အိမ်ထောင်သည် အလယ်၊ သွေးဆုံးနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အဆုံး ကျောက်ချဉ်က အလွန် အသုံးဝင် ပါတယ်။
အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးမှာ အမျိုးသမီးတိုင်း မိန်းမ ကိုယ်သန့်ရှင်း ရေးဟာ အလွန် အရေးကြီး ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်နံ့ ထွက်တာ၊ စိတ်လက် မလန်းဆန်းပဲ သွက်လက်မှု မရှိဖြစ်နေတာ တွေဟာ၊ ယားယံ တတ်တာ တွေဟာ မိန်းမကိုယ် သန့်ရှင်းရေး ကိစ္စနဲ့ တိုက်ရိုက် ပတ်သက်ပြီး အဆိုပါ ကိစ္စမှာ ကျောက်ချဉ်က အလွန် အသုံးတည့် ပါတယ်။
ဒီအပြင် ခုခေတ်မှာ နာမည်ကြီး နေပြီး ကာကွယ်ဆေးတွေ ငွေကုန်ခံ ထိုးနေရတဲ့ သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ လိုမျိုး မဖြစ်ပွားအောင် ဟန့်တား ကာကွယ် နိုင်မှုမှာ ကျောက်ချဉ် ဟာလည်း အကျိုး အလွန် ရှိပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ကို ကျန်းမာစွာ လွယ်လိုသူ အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးတွေ အတွက်လည်း ကျောက်ချဉ်က အစွမ်း ထက်ပါတယ်။ ကလေးမရလို့ စိတ်ညစ် နေရသူများ အတွက်လည်း အလွန် အသုံး တည့်ပါတယ်။
ဒီအပြင် ရာသီလာချိန် ခေါင်းကိုက်တာ၊ ကိုယ်လက် အဆစ်အမြစ် ကိုက်ခဲတာ၊ သွေးလန့် တတ်တာ၊ ရာသီ မမှန်ပဲ လာရန် ခက်ခဲတာတွေ အတွက်လည်း ကျောက်ချဉ်က အသုံး ၀င်ပါတယ်။
ပြီးတော့ သွေသား သန့်ရှင်းပြီး အသားအရေ စိုပြေမှု တွေကိုလည်း ကျောက်ချဉ်က စွမ်းဆောင် စေပါတယ်။ ချွေးပေါက် ကျယ်တာအစ ဒွါရပေါက် တွေလည်း ကျယ်တာ ကိုလည်း ကျဉ်းစေတဲ့ သတ္တိ ရှိပါတယ်။
ကျောက်ချဉ်ကို အသုံးပြု ပုံကတော့ အင်တုံတခု သို့မဟုတ် ပလပ်စတစ် ဇလုံကြီး တခုထဲမှာ ကျောက်ချဉ်ကို သင့်တင့်တဲ့ ပမာဏ ထည့်ပြီး ပျော်ဝင် သည်ထိ စောင့်ပါ။ ပြီးရင် အမျိုးသမီးများ အနေနဲ့ မိမိရဲ့ မိန်းမ ကိုယ်ကို အဆိုပါ ဇလုံတွင်း ကျောက်ချဉ် ရေဖြင့် တနေ့လျှင် ၁၅ မိနစ်လောက် စိမ်ပေးပါ။
လုပ်နည်း လုပ်ဟန်က အင်မတန် ရိုးစင်းပြီး လွယ်ပေမယ့် နေ့စဉ်ပုံမှန် လုပ်ဆောင် ပေးခြင်း ဆိုတဲ့ အရာကို အမျိုး တော်တော် များများမှာ အခက်အခဲ တွေ့တတ် ကြပါတယ်။ ဒါကိုတော့ သတိပြု စေချင် ပါတယ်။
နေ့စဉ် ၁၅ မိနစ်တာ ကိုယ့်ကျန်းမာရေး အတွက် အချိန်ပေးပြီး ကျောက်ချဉ်ရေ စိမ်ပေးခြင်း ကြောင့် ရရှိ လာမယ့် ရလာဒ်က ကြီးမား လှပါတယ်။
ပျိုမေတို့မှသည် သက်ကြီးရွယ်အို အမျိုးသမီးကြီးတွေ အထိ အသုံးတည့်ပြီး အကျိုးရှိတဲ့ နည်းလမ်း တခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကုန် ကျေးကျလည်း အလွန်နည်းပြီး ခက်ခဲမှုလည်း မရှိပါဘူး။
30 Days Stats
Myanmar Historical Film
Jun 2018 ( 36 )
May 2018 ( 40 )
Mar 2018 ( 38 )
Feb 2018 ( 189 )
Jan 2018 ( 83 )
Nov 2017 ( 39 )
Oct 2017 ( 91 )
Sep 2017 ( 30 )
Aug 2017 ( 88 )
Jul 2017 ( 369 )
Jun 2017 ( 583 )
May 2017 ( 685 )
Apr 2017 ( 658 )
Mar 2017 ( 578 )
Feb 2017 ( 584 )
Jan 2017 ( 632 )
Dec 2016 ( 140 )
Nov 2016 (5)
Sep 2016 ( 19 )
Aug 2016 ( 26 )
Jul 2016 (4)
Jun 2016 ( 12 )
May 2016 ( 24 )
Apr 2016 (9)
Mar 2016 ( 24 )
Feb 2016 ( 18 )
Jan 2016 ( 38 )
Dec 2015 ( 51 )
Nov 2015 ( 49 )
Oct 2015 ( 33 )
Sep 2015 ( 28 )
Aug 2015 ( 25 )
Jul 2015 ( 28 )
Jun 2015 ( 44 )
May 2015 ( 57 )
Apr 2015 ( 55 )
Mar 2015 ( 59 )
Feb 2015 ( 69 )
Jan 2015 ( 104 )
Dec 2014 ( 44 )
Nov 2014 ( 41 )
Oct 2014 ( 38 )
Sep 2014 ( 65 )
Aug 2014 ( 53 )
Jul 2014 ( 48 )
Jun 2014 ( 132 )
May 2014 ( 206 )
Apr 2014 ( 180 )
Mar 2014 ( 171 )
Feb 2014 ( 174 )
Jan 2014 ( 172 )
Dec 2013 ( 229 )
Nov 2013 ( 248 )
Oct 2013 ( 286 )
Sep 2013 ( 332 )
Aug 2013 ( 411 )
Jul 2013 ( 290 )
Jun 2013 ( 279 )
May 2013 ( 95 )
Apr 2013 ( 118 )
Mar 2013 ( 174 )
Feb 2013 ( 145 )
Jan 2013 ( 139 )
Dec 2012 ( 74 )
Nov 2012 ( 13 )
Oct 2012 ( 43 )
Sep 2012 ( 23 )
Aug 2012 ( 51 )
Jul 2012 ( 20 )
Jun 2012 ( 39 )
Apr 2012 (2)
Mar 2012 ( 12 )
Feb 2012 ( 14 )
Jan 2012 ( 12 )
Dec 2011 ( 19 )
Nov 2011 ( 21 )
Oct 2011 ( 78 )
Sep 2011 ( 134 )
Aug 2011 ( 38 )
Jul 2011 ( 38 )
Jun 2011 (3)
သစ်ထူးလွင် Android App
သုတေသနအသစ်တစ်ခုအရအမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ (T2DM)သုံးတဲ့ဆေး တစ်မျိုးကအရက်ကြောင့်မဟုတ်သော အသည်းအဆီဖုံးရောဂါ (NAFLD) ဝေဒနာခံစားနေရ...
ဖုန်းပြော သူများ သတိထား၊ ကြာရှည်စွာ ဖုန်းပြောလျှင် နားကို ဒုက္ခ ပေးရာရောက်
ခေတ်မီ တိုးတက် လာသည့် အလျောက် ဆန်းပြားသော လျှပ်စစ် ပစ္စည်း များနှင့် လူ့အသုံး အဆောင် ပစ္စည်း များမှာ လည်း တစ်ခု ထက် တစ်ခု ပိုမို ကောင်းမွန် ...
Alcohol and Liver အရက်ကနေ အသည်းကိုဘယ်လိုဆိုးစေသလဲ
၁။ ၄၅ နှစ်။ ယောက်ျား။ uric acid 10.9 alkaline phosphates 110 Alt 69 Ast 129 Gamma-gt 338 ဆရာ အသည်းယေဘုယျအခြေအနေကိုသိနိုင်ပါသလား။ အရက်အလွန်...
အမျိုးသမီးများ အိပ်မပျော်ရခြင်း အကြောင်းရင်းများ
ဒေါက်တာရှင့် ကျွန်မအသက် ၆၀ ကျော်ပါပီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးနှစ်ထဲက ညဆို နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မပျော်ပါဘူး ဆရာ။ အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပါသလည်း။ ကျွန်မမှာ ...
ရေယုန်ရောဂါဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာအဖြစ်များနေပြီး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်မှာ ဖြစ်လာလျှင် ကလေးကိုပါ ကူးစက်နိုင်ကာ အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်တဲ့အထိ ဖြစ်စေန...
This isasister website of No #1 Myanmar News aggregator site THIT HTOO LWIN . The online advertising on this site is exclusive managed by MyOpenAds.com . Modified by myOpenware, web development and design company in Myanmar.